Par Taratra sur 07/04/2021 Economie, NS Malagasy
Mitohy hatrany ny asan’ny Paositra Malagasy anatin’izao hamehana fahasalamana izao, ary vao mainka mihamafy aza. Nozarana fanafody CVO+ ny mpiasa rehetra, nisaoran’ny tale jeneraly, Ranarison Richard, sy ny minisitra Ramaherijaona Andriamanohisoa. Ankoatra ny fanavaozana ny fomba fiasa amin’ny fampiharana ny teknolojia vaovao « digitalisation », manao ny Paositra amin’ny fizarana vatsim-pianarana any amin’ny oniversite manerana ny Nosy; […]
Laza avy any ampita: nisaraka tanteraka i Kim Kardhasian sy i Kanye West!
Par Taratra sur 07/04/2021 NS Malagasy, NS-Culture
Anisan’ireo nilatsaka hofidina ho filoham-pirenena amerikanina ilay mpanao rap malaza, i Kanye West, tamin’ny taona 2020. Nanomboka teo ihany koa no tsikaritr’ireo mpanaraka ny vaovaon’ireo olo-malaza fa misy olana eo aminy sy i Kim Kardhasian, vadiny. Somary solafaka mantsy ny kabary nataon’i Kanye West tamin’izay, nanambarany fa nieritreritra ny hanala ilay zanany farany voalohany, tamin’i […]
Ligin’Analamanga: hahemotra ny fifaninanana « Savate boxe française »
Par Taratra sur 07/04/2021 NS Malagasy, NS-Sports
Tsy azo ihodivirana. Fanapahan-kevitra hentitra ny noraisin’ny avy eo anivon’ny ligin’Analamanga, taranja Savate Boxe Française, taorian’ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena sy ny fihanaky ny valanaretina Covid 19. Tsy nisafidy ny hanafoana ny fifaninanana ny mpikarakara fa fanemorana izany ny tapaka, saingy hotanterahina ao anatin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Araka izany, hahemotra ny 23 hatramin’ny 25 […]
Fikarakarana ny lalaon’ny Barea sy i Niger: mpikamban’ny FMF efatra tratran’ny Covid-19
Anisan’ny foiben’ny coronavirus ny any Toamasina. Nifindran’ny valanaretina covid-19 ireo mpikambana miisa efatra eo anivon’ny Federasion’ny baolina kitra (FMF) tamin’ny fikarakarana sy fanomanana ny lalaon’ny Barea sy i Niger farany teo. Voalazan’ny loharanom-baovao fa ireo nisahana ny asa rehetra tamin’ny fampitaovana no tsy afa-bela tamin’izany. Anisan’izany ny iray niatrika sy nitarika fivoriana matetika nialoha ny […]
Fampivelarana ny kabary: tohizana ny « Andeha handalina kabary »
Anisan’ny kolontsaina malagasy maro mpitia sy mpianatra ny kabary. Mifanaraka amin’ny toe-java-misy maneran-tany manoloana ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19. Tohizan’ny Foiben’ny fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany) ny fampianarana ampitain-davitra (amin’ny alalan’ny “zoom”), taom-pianarana 2021-2022, eo amin’ny sokajy mpandalina. Hizara roa ny fomba atao mialoha ny handraisana ny mpiofana. Fisoratana anarana santatra eo anivon’ny sampana sy […]
Teren’ny zava-misy ka lasa hafakely ny niainana ny « Star Tour » tamin’iny fetin’ny Paska iny. Natao nivantana tamin’ny « Facebook » mantsy izany. Nangadihady nanoloana ny Garan’Antsirabe nandritra ny fetin’ny Paska teo… Tsy mahazatra izany, saingy tsy maintsy niainana fanindroany izao. Tsy tena nangina kosa anefa ireo mpankafy mozika sy ny ambiansy « Star Tour » satria natao mivantana tamin’ny […]
Par Taratra sur 07/04/2021 En Bref, NS Malagasy
Nambaran’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, omaly, fa nisy ny fifampiresahana niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny fitondram-panjakana mikasika ny filana eo amin’ny oxygène entina hamonjena ireo marary mafy sy sempotra vokatry ny covid-19. Efa misy ny “oxygène liquide” 13m3 izay niainga avy any Toamasina ary antenaina ho tonga eto Antananarivo anio. Hapetraka amin’ireo toerana mandray ny marary […]
Fiba: raikitra ny “E-Sport Open III”
Tsy voasakan’ny valanaretina Covid 19. Taranja iray afaka mitohy sy mizotra soa aman-tsara ny “Jeu Video”, eo amin’ny taranja basikety. Hotanterahina ny 16 hatramin’ny 18 avrily izao ny fifaninanana “E-Sport Open III”, handraisan’i Madagasikara anjara. Mpilalao voafantina miisa 7 mirahalahy ny mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ity lalao ity, ahitana an-dRandrianarivelo Andraina, Ralainaivo Mamitiana, Andrianarison Rova, […]
Ny alatsinain’ny Paska: olona 3 matin’ny covid-19
Par Taratra sur 07/04/2021 Divers, NS Malagasy
Raha ny salanisa navoakan’ny CCO, olona telo indray no matin’ny covid-19 ny alatsinain’ny Paska teo. Iray teto Analamanga, iray tany Atsimo Andrefana ary iray tany Anôsy. Mitontaly 165 kosa ny tranga vaovao tamin’ireo 528 nanaovana fitiliana ny andron’io alatsinain’ny Paska io. 118 tamin’ireo tranga ireo dia teto Analamanga avokoa. 271 ny marary mafy mampiseho […]
Fiatrehana ny valanaretina covid-19: mihena ny risipon’ny mpiasan’ny fahasalamana
Par Taratra sur 07/04/2021 Faits Divers, NS Malagasy
“Kivy izahay Paramedy ary efa ambany dia ambany ny risiponay hiatrika ny covid-19”, hoy ny paramedicaux izay soloin’ny filohany tena, Ralibera. Mahatsiaro tena ho atody miady amam-bato izy ireo manoloana izao ady mavesatra amin’ny valanaretina izao. Tsy nomena fiofanana momba ny covid ny mpiasan’ny fahasalamana, indrindra amin’ity variant vaovao ity. Tsy misitraka ny risipo ara-dalàna […]
Holafitry ny farmasianina: tsy azo ekena ny fampiakaram-bidy mihoapampana ny fanafody
Nitondra fanazavana ny filohan’ny holafitry ny farmasianina, mikasika fepetra noraisina amin’ny fivarotana fanafody amin’izao hamehana ara-pahasalamana misy eto amin’ny firenena izao. Nanome toky ny holafitry ny farmasianina, Rakotomalala Tantely fa tsy hisy ny fiakaram-bidy mihoapampana na fanararaotana hataon’ireo farmasia amin’ny fanafody, indrindra ny fitsaboana ny covid-19. Sao misy alaim-panahy ireo farmasia raha izy irery […]
Mpiasan’ny fitsarana tratry ny Covid-19: mikatona mandritra ny 15 andro ny fitsarana
Mikatona mandritra ny 15 andro ny fitsarana eto Toamasina. Tahaka ny efa natao tamin’ny andiany voalohany manoloana ny Covid-19, anisan’ny tsy afa-bela tamin’izany ireo mpitsara ary maromaro izy ireo no tratran’ity valanaretina ity. Miseho indray izany amin’izao andiany faharoa izao ka ampolony ireo mpisehatra eo anivon’ny fitsarana no marary. Anton’ny nandraisan’ny tompon’andrakitra fepetra nanakatona vonjimaika […]
Raboana Holijaona : “Tsy ataotao foana ny safidy amin’ny vaksiny Covid-19”
“Hivoaka ato ho ato ny vaksiny mety amin’io karazana valanaretina afrikanina tatsimo io. Hisy safidy hataon’i Madagasikara, ary izay ny dingana fanaraha-maso fa tsy azo atao kitoatoa ny safidy amin’ny fampiasana vaksiny.” Izay ny fanazavan’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Pharmalagasy, Raboana Holijaona, manoloana ny amin’ny fampiasana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Lazain’ny manampahaizana, ohatra, fa ny vaksiny […]
Misaona ny fandraharahana: nodimandry ny minisitra teo aloha, i Andreas Claude
Par Taratra sur 07/04/2021 NS Malagasy, NS-Politique
Banga ny tontolon’ny fandraharahana. Nodimandry, omaly, ny minisitra teo aloha, i Andreas Claude. Efa minisi-panjakana nisahana ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra ny tenany, ny taona 1992. Fony fitondran’ny Pr Zafy Albert ary anisan’ny minisitra nandrafitra ny governemantan’ny Praiminisitra Rakotovahiny Emmanuel ny tenany tamin’izany. Ankoatra izany, filoha tale jeneraly (PDG) eo anivon’ny orinasa […]
Fitantanana andrimpanjakana: hifidy ny ho filohany ireo mpikambana vaovaon’ny HCC
Hotanterahina ny 8 avrily izao etsy Ambohidahy ny fianianan’ireo mpikambana vaovao miisa sivy mianadahy mandrafitra ny HCC. Tokony ho fantatra amin’izany koa ny ho filoha hitarika io Andriampanjakana io. Hitarika ny fotoana ny zokiolona indrindra amin’izy ireo vao nofidina sy notendrena, amin’ny alalan-dRakotoarisoa Florent, tafaverina indray amin’ny toerany, etsy Ambohidahy, raha efa teo anivon’io HCC […]
Fotoam-pivavahana, fandevenana…: nametraka lamina koa ny fiangonana ny katolika
Namoaka fanambarana koa ny eo anivon’ny fiangonana katolika. Anisan’ny nitodihan’ny hafatra ireo pretra. “…Momba ny fandevenana manokana, tsy asiana lamesa fa vavaka fanankinana ny maty amin’ny famindrampon’Andriamanitra no atao ka na any an-trano na eo am-baravaram-piangonana ihany izany. Sarotra loatra ny atrehintsika ankehitriny”, hoy ny fanambaran’ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, novakin’ny vikera jeneraly, ny […]
Faritra Analamanga : hanenjana ny fepetra sy hanasazy ny zandary
“Efa mihatra tokoa ireo fepetra noraisin’ny filohan’ny Repoblika, nanomboka omaly. Na ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina, na ny tsy fahazoan’ny olona miditra sy mivoaka amin’ny faritra Analamanga.” , hoy ny komandin’ny vondron-tobim-pileovana eo anivon’ny Zandarimarim-pirenena sady lehiben’ny Emmo/Far Analamanga, ny kolonely Randrianarivelo Jean-Anicet, ny amin’ny fepetra ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy misy mahazo mivoaka […]
Par Taratra sur 07/04/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahamenatra, mampalahelo… Mbola misy ihany ny tsy manaiky ny fisian’ny valanaretina Covid-19; eny, na efa ao anatin’ny andiany faharoa mahery vaika aza. Na tsy mahalala ny sasany, na tsy te hahalala. Tsy ampy ny fanazavana? Ao indray ny mody adala na minia adala: aretin’ny firenen-dehibe, hono; aretin’ny mpanankarena. Tonga hatramin’ny hoe aretina politika: fitadiavam-bola, paipaika […]
Toamasina: Paska tsy nieren-doza, olona miisa 18 indray maty
Tsy nieren-doza ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska tao Toamasina, tamin’ity taona ity. Raha ny zava-nisy tany an-toerana, nitelina olona ny ranomasina, nanjaka ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanafihana mitam-piadiana nahafatesana olona. Mitotaly 12 be izao ireo namoy ny ainy tao anatin’ny telo andro (ny asabotsy, ny alahady ary ny alatsinain’ny Paska). Teo koa ny olona […]
Mody hoe nisy nandroba: tratra ilay mpiasa nangalatra tao amin’ny “cash point”
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria CSP 67 ha, ny asabotsy lasa teo teny 67 ha Atsimo sy Ampitatafika, noho ny fandrobana “cash point” ny jiolahy telo. Ny asabotsy lasa teo, nahazo antso avy amin’ny mpanampiny ny tompona “cash point” iray eny 67 ha Atsimo nilaza fa nisy nanafika ny tenany ka very tamin’izany […]
Acmil: miatrika ny dingana manaraka ireo mpianatra ho manamboninahitra
Miditra amin’ny dingana faharoa ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho manamboninahitra ao amin’ny Akademia miaramila ao Antsirabe, nanomboka ny alatsinainy 6 avrily 2021. Ny dingana voalohany, notanterahina nanerana ny renivohi-paritany enina manerana ny Nosy ka ny fizaham-pahasalamana sy ny laza adina an-tsorara no notontosaina tamin’izany. Amin’ny dingana faharoa, novorina ao amin’ny Acmil Antsirabe avokoa ireo […]
« Raharaha Ambodimita »: ankoatra ireo jiolahy roa voatifitra, vehivavy roa hafa tratra
Hatolotra ny fampanoavana, anio, ireto jiolahy telo (ahitana vehivavy roa), naman’ireo jiolahy lavon’ny polisy teny Ambodimita, ny 1 avrily lasa teo. Maro ny fanafihana efa vitan’ireto jiolahy ireto, araka ny fanazavany tamin’ny polisy… Azo sambo-belona tamin’io andro io ka nentina nanaovana fanadihadiana ny lehilahy iray hafa naman’ireo roa lahy maty voatifitra. Tamin’ny fakana am-bavany azy […]
Par Taratra sur 07/04/2021 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Nahitam-bokany ny ezaka nataon’ny Zandarimariam-pirenena, ary azo lazaina fa nihena ny ”Raharaha kidnapping”, indrindra fa ny mahakasika ireo teratany karana, na eto an-dRenivohitra na tany amin’ny faritra, taorian’ny nahalavo ireo jiolahy raindahiny… Fanadihadiana… Raha ny fanadihadiana natao, ny taona 2000, ny nanombohan’ity raharaha fakana an-keriny teratany karana ity ka ry Mahandry (fianakaviana iray ihany i […]
Fepetra avy amin’ny fanjakana: tsy azo atrehina ny hetsika ara-panatanjahantena
Par Taratra sur 06/04/2021 Divers, NS Malagasy
Nilatsaka ny fepetra, manoloana ny forongatry ny covid-19. Hatao ankalamanjana avokoa ny fifaninanana eo amin’ny fanatanjahantena, araka ny kabary nataon’ny filoha Rajoelina, ny sabotsy teo. Fanamafisana ny fepetra efa noraisina, ny tena nisongadina nandritra ny lahateny, momba ny fanatanjahantena. “Tsy azo atao mihitsy ny anatrehan’ny mpijery ny fifaninanana rehetra ary tsy maintsy hatao ankalamanjana avokoa […]
Kitra- Ligue des champions d’Europe : hifampitady ny Real de Madrid sy i Liverpool
Par Taratra sur 06/04/2021 NS Malagasy, NS-Sports
Hanomboka anio ny lalao ampahefa-dalana eo amin’ny « Ligue des champions d’Europe 2021 ». Ho lalaon’ny samy henjana avokoa izany ary andrasan’ny maro. Voalahatra amin’izany ny fifandonan’ny Real Madid (Espaina) sy ny Liverpool (Angletera). Adin’ny ekipa samy goavana ity satria izy ireo no nanao ny famaranan’ny “Ligue des champions 2019”. Hanala vela ny Liverpool, anio. Tombanan’ny maro […]
« Précédent 1 … 4 5 6 7 8 … 1 626 Suivant »